20 Maarso: Maalinta Caalamiga ee Farxadda | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / 20 Maarso: Maalinta Caalamiga ee Farxadda
20 Maarso: Maalinta Caalamiga ee Farxadda
Posted by: Mahad Mohamed March 20, 2019
Himilo FM –Sanadkii 2013-ka ayay ahayd markii ugu horreysay ee lagu xuso Maalinta Caalamiga ah ee Farxadda gudaha shir ay kawada qeyb-galeen wiilkii uu awoowga u ahaa Nelson Mandela, Ndaba Mandela iyo gabadha uu dhalay madaxweynihi Maraykanka ee Bill Clinton oo ka dhacay magaalada New York.
Markii aynu dib ugu laabanno dinteenna, maadaama Islaamku uu yahay hab nololeed maalinle ah, farxaddu waa qeyb kamid ah. 1,400 sanno kahor, Muslimiinta waxaa lagu boorriyay inay isku dhoolla-caddeeyaan; isku muujiyaan farxad. Si taas u jirto had iyo jeerna, waxaa la faray in labada qof ee Muslimka ah aysan ku kala maqnaanin carro iyo xanaaq seddax maalmood wax ka badan.
Dunida kale, waxay aheyd qarniyadii danbe markii lasoo ogaaday faa’iidada ku jirta farxadda iyo dhoolla-caddaynta. In kasta oo wali meelaha qaar ee ka baxsan dunida Muslimka ay ka jiraan kiisaska is-dilka iyo wixii soo raaca, haddana dadaallada ku baxa in dadka laga caawiyo sidii reynreyn qalbi ah iyo farxad macnawi ah ay u hanan lahaayeen waa kuwa mar kastaba taagan. Waana waliba sida la dhihi karo, sababta maalintan oo kale ay QM ugu asteysay maalinta caalamiga ah ee farxadda.
Faa’iidooyinka ku jira farxadda keliya lagu hanan maayo dabacsanaan iyo xasillooni ee waxay sidoo kale kugu kaalmeyneysaa inaad kusoo jiidato bulshooyinka kula nool. Waxaad ku abuuran kartaa saaxiibo badan; ku sameysan kartaa xiriiro kaa fog; kuna hanan kartaa qalbiyada kaa sii jeeda.
Waloow marmar la tilmaamo in farxadda ku dheehan wajiga qofka ay noqon karto dareen maaldahan oo aan ka turjumeyn waxa ku laba-gaddoomaya dubaaqa qofka, hadana inaad caradaada ka qarsato dadka kula nool wali waa mid diinteennu aad u boorriso. Sida ku cad axaadiista Nabiga NNKH, qofka geesi ah waa kan xakameeya caradiis marka uu xanaaqo. Hayeeshe waxaa kasii wanaagsan qofka farxad kaga fal-celiya dulmiga lagula kaco.
Previous: Shiinaha: Layli shaqo oo loo diray arday oo dhaliyay dood kulul!
Next: Man United iyo Arsenal oo bartilmaameedsanaya ‘Francisco Trincao’